Garoowe oo laga daahfuray dhismaha labo wado oo Laami ah. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garoowe oo laga daahfuray dhismaha labo wado oo Laami ah.
Garoowe oo laga daahfuray dhismaha labo wado oo Laami ah.
June 11, 2019 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Magaalada Garoowe ee Caasimada Dowladda Puntland waxaa laga daahfuray dhagax dhiga Mashruuca labo wado oo laami laga dhigayo,kuwasoo noqonaya wadada isku xirta Raysqaboobe iyo Suuqa injida iyo mid isku xiraysa Laamiga Islaan Maxamed iyo Laamiga Sheikh Cabdiqaadir.
Munasabadda dhagax dhiga waxaa kazoo qaybgalay wasaaradda Howlaha guud,Arrimaha gudaha,Maaliyadda ,Maamulka Gobolka Nugaal,kan degmada Garowe,Hay,adaha ILO & UNHABITAT.
Duqa Caasimadda Axmed Said Muse oo ugu horeyn jeediyey warbixin ku adan barnamijyada horumarineed ee Caasimadda ka socda ayaa in wadooyinkani ay kamid yihiin wadooyin ka socda magaladda ,kuwasoo isugu jira Masharaiicda JPLG iyo worldbankiga,isla markaana uu ku faraxsanyahay in mashariicdani si habsami leh u socoto.
,ka warbixiyey faaiidada ay leedahay wadadu ayaa sheegay in ay qayb weyn ka tahay horumarka iyo nabadgelyada xaafadaha iyo bulshada oo goobaha ganacsiga iyo isu socodka uga faaiidaysanaysa.
Duqu waxaa uu tilmamay muhiimada ay leedahay wado laami ahiye,iyadoo dadweynuhu uga faaiidaysanayo balarinta ganacsiga iyo isu socodka magalada,waxaana uu dadweynaha ka codsaday in ay kala shaqeeyaan bilicda iyo Nadaafadda dariiqyada,iyadoo shacabka laga doonayo in ay qurxiyaan dhinacyada jidka.
MARK oo madaxa ILO oo ku hadlayey afka Mashruuca JPLG ayaa sheegay in mashruucaani galay wajigii sadexaad isla markaana uu yahay 5 sano oo cusub ayna ka filayaan in uu dhaqalaaha wax weyn ka badelo marka la dhamaystiro.
Wasiirka Howlaha Guud & Gaadiidka ayaa isna xusay ahmiyada ay degaanka u leedahay wado laami ahi,iyadoo ay madaxda iyo shacabkaba ku dhiirigeliyey in la garab istaago howlaha horumarineed ee socda,wasiirka waxaa uu faray howlwadeenada , xirfadleyda & shirkada dhisaysaba in ay xil iska saran sidii loo hirgelin lahaa wadooyin tayo leh,iyadoo ay jiridoonto qiimayn mugleh oo lagu samayn doono dhismaha jidadkan cusub
Dhismaha waxaa iska kaashanaya Hayadaha ku bahoobay Mashruuca JPLG, dawladda Puntland iyo Dagmooyinka uu mashruucu ka socdo oo ay ka mid tahay Caasimadda Dowladda Puntland ee Garoowe.
Horseed Media.net a